Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Casri Waliba Camalkiisa Leh: Cilmi Sii Kordha Iyo Caqli Sii Gudha Waa Iyama? By Abdirasak Warsame
Casri Waliba Camalkiisa Leh: Cilmi Sii Kordha Iyo Caqli Sii Gudha Waa Iyama? By Abdirasak Warsame
Maalin dhawayd bay ahay, Guri ehelka ah baan joogay. Waa xili barqona ay ka tagtay duhurna aanay gaadhin qiyaastii 11:30-kii duhurnimo. Waxaa qolkii aan ku jirnay dhawr jeer igu soo noq-noqoday wiil yar oo aan waalid u ahay, Moobaylka ayuu intaaba I waydiinayaa. Ana sheeko ayaan wiilal kale oo xaafadda ahaa aan kula haystayoo, waan maqlaa mar walba oo uu waydiiyo, balse si aan u jeedin ayaan marba ma hayo ugu celinayaa.
Mar afraad ama shanaad baan ku ambabaray oo intaan sheekadii aan wadanay aan ka soo jeestay waxaan su’aalay wiilkii;
“Adeer yaan kuu garaacaa?”
Wuxuu iigu jawaabay;
“Adeer Cidna ma garaacayo, heblaayo ayaa moobilkeedii iga qaadatay, markaa waxaad calculator-ka iskugu kay dhufataa todoba sideed ku dhufo?”
Hadda waa 7X8 Waan yar yaabayoo, wuu I dul taagnaaye intaan kor u eegaybaa waxaan ku idhi;
“Oo adeer, intaad igu soo noq-noqonaysay baabad faraha iskaga dhufan lahayde maxaa ku kadeeday!”
Intuu yar khajilay buu goroda laad-laadiyay, oo uu hoos u yar foorarsaday, intii aanu ii jawaabinba wiil qoladii aanu haasaawaynay ah baa ku soo boodayoo wuxuu yidhi;
“Waar maxaad kula yaabi, Annagaan laba laba ku dhufo dusha ka garanayninbee!”
Adduun yada waxaa maalin ba maalin aan ku darayn oo intaasba is rogaya shaagga wax qabsiga iyo hal-abuurka ee uumiyaha ku nooli uu subax noolba talaabo hore u sii qaadayo. Maalintii timaadba waxaa adduunka ku soo biira walax ama walxo cusub oo daaha laga faydaa, ama wax sii jiraybaa intoo boodhka laga hurgufo lasii dhal-dhalaaliyaa oo lasii naax-naaxiyaa.
Ha u badnaadeen agabka teknoolajiyada’e, waxaa subax noolba aqalkeena iyo ardaageenna la soo dhigaa, qalab cusub oo hor leh, adeegsigooduna yahay mid aynu u jeel qabno, sidaas darteedna aynu hurranahay u borotankeeda iyo in aynu meelaha lagu iibiyo safaf dhaadheer u galno.
Waa balaayo loo baahan yahaye, qof waliba agabkaa sidii uu u adeegsigiisa u qabatimo ee uu u qudhqudhsho uunbuu caqligiisuna u naaqusaa. Haddii aan si kale u idhaa, maalinba agabkii kugu soo kordhaa waxa uu la tagaa oo uu sahaydaa qayb maskaxdaada ka mid ahi in ay seexato amaba ay gabi ahaanba shaqadii ay jidhka intiisa kale u haysay ay joojiso.
Waxaan taas u daliishan karaa, da’daydu markii ay ahayd inta uu jiro wiilkaas yar ee aan kor ku xusay, waxa aan korka ka aqaanay isku dhufashada xisaabta ilaa godka boqolayda wixii ka hooseeya, maantana ma aqaan! Shan laba ku dhufo haday igu qabsato, mobilka ayaan ku foorarsanayaa.
Bal haddaba sida ay adduunyadani ilbaxnimada iyo daahfurka aan kala joogsanayn ee ay hadh iyo habeenba ku hawlantahay ee aynu innana in aynu hawl yaraan ku helno u heellanahay aynu tusaalayaal dhawr ah ka bixino siday taban ee uu Caqligeenii iyo Qaadkii Maskexeed ee aynu lahayn (Cerebral Capacity) maalinba cad ka mid ah u curyaaminayo;
Hadii aad la sheekaysatid Suugaan-Dhaadhiga (dadka suugaanta dadka kale xafida), raaciisii hore waxa ay kuu sheegayaan in hadiiba gabayga hal-mar loo mariyo aanay mar labaad u baahnayn, hadda waa gabay dhan oo dhawr boqol oo bayd ah. Maanta ma laga yaabaa in la helo qof ay maskaxdiisu sidaas u shaqaynayso. Haa! Waa laga yaabaa! Waase meelaha aanay xadaarada iyo ilbaxnimada casriga ahi wali qoobka dhigin, waase halkee halkaasi!
Waxaa soo baxay qoraalka. Ninkii odayga ahaa ee Suugaan-Dhaadhiga ahaa, waxa uu qaatay qalin, ka dibna halkii uu maskaxdiisu sidii koolka ay u qabsan jirtay ayaa wuxuu bilaabay in marba bayd inta loo mariyo uu qalinka la boobo. Taas waxaa ku xigay in ay soo baxdo agabka codka lagu duubo, ka dibna waxa uu gabi ahaanba joojiyay, in ay haba yaraatee ay maskaxdiisu hawl ku mashquusho.
Ninkii qalin-leeblaha ahaa ee casrigii farta iyo qoraalka uu qalinkiisu tufta lahaa, ee inta aanay laba tuke is daawanba dhawrka bog qoraayay, maanta markii qalabka wax duuba (cod ama sawir) soo baxay isna hurdo dheer ayuu barkinta buurtay.
Dhakhtarku awal hore, marka uu bukaanka baadhaayo, calaamadaha iyo astaamaha uu bukaanku u yeedhiyo maskaxda ayuu iskaga gayn jiray, isaga oo la kaashanaya aqoontiisa waxaanu odhan jiray ‘Waxaas iyo waxaas ha laga baadho’. Maantase sidii way ka duwan tahay. Dhakhtarka ku waraysanayaa Saxan yar (tablet or Mobile) buu sitaa, oo uu edeg yar (Application) uga sii dhex yaalo. Markii uu waraysiga bukaanka dhameeyo, natiijadii uunbuu edegaa galinayaa, waxaa markiiba u soo boodaya natiijadii oo bilaa ducashiyo duduuc si hawl yar loogu sheegaayo markiiba.
Wariyaha Ibraahim Suxufi oo ah Mulkiilaha awdal24news.com ayaa maalin aanu sheekaysanaynay waxa uu ii sheegay, in ku dhawaad toban sanno ka hor – oo uu ka hawl galaayay TV Boorama – iyo maanta oo uu si ku meel gaadh ah ula shaqaynaayay telefishanka Rayo Tv aanay waayaha labadaa marxaladood ku soo kala maray aanay shaqo iyo shaahid isku lahayn.
Waxa uu ii sheegay
“Xiligii aan ka hawl galaayay TV Boorama oo muddo yar oo kooban hawada soo gali jiray, ay hawsheedu ka adkayd Tvyadan maanta hawada 24-ka saacba sidii dur-durka isaga socda. Hadiiba aan waydiiyay sabatana, waxa uu ii sheegay; in xiligaas wixii TV-ga ka baxaa ay toos ahaayeen. Haday tahay war, war-bixin, barnaamij iyo wax kastoo Tv-ga ka baxaaba, sidaas darteedna ay hawshu ahayd Gole-ka-fuul uu qofku kartidiisa iksu halaynaayay.”
Waxa uu intaas ii raaciyay
“Maantay noqotay, warbixin hadaan duubayo sidaan doonaan ka yeelayaa, maxaa yeelay Barnaamij baan ku duubayaa ii jar-jaraya oo isagu ii habaynaya, meesha aanan u baahnayn waan iska saarayaa, anoo dhinac kaala sheekaysanaaya ayaan dhinacna ka duubayaa, kolba erey baan soo xasuusanayaa, codkayga laxanka aan jeclaado ayaan saarayaa. Mararka qaar Cawke ayuu kuu ekaysiinayaa, hadaad doontana C/laahi Xaaji. Waayadii hore, marka aad warka gasho, Illayn waa Toos ka soo noqod malaha ee waa sidaad u gashay, hadaad qaldanto intaas oo kun baa ku daawanaysa, maantase Camara maanka uunbaad ii jooji leedahay!”
Mid ka mid ah macalimiintii aan ugu jeclaa ee Igu Soo marta intii aan jaamacada Camuud wax ka baranaayay Bashiir Axmed Warsame, macalinimada ka sokowna ah oday waayo arag meelo badan ka soo biyo cabay, ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu nooga qisooday sida taban ee ay tiknoolajiyada casriga ahi u naafaysay ee ay u badhaxday aqoontii saafiga ahayd.
Bashiir ma jeclayn buugga uu wax ka dhigayo in uu cutubka uu kaaga dhigaayo eray qudha oo ka mid ahi ku seego. Buugga oo buugta aan arkay kan ugu culus ah, (qiyaas ahaan laba KG kama uu yarayn) ayuu labada saacadood ee ay xiisadu socotoba uu kor u hayaa. Waxa uu arkay qaar ka mid ah ardaydii oo woxoogaa cashar ah oo meelo laga soo garoocday (Slides) is hor haya. Markaasbuu intuu mid ka mid ah ardaydii ay waraaquhu hor yaaleen mid ka mid ah is dul taagay, oo warqadiina kor u qaaday ku yidhi;
“Marka aad maanta kaas akhrido, uu nin kale diyaarsaday, ma waxbaad dhigatay mise waad luggo’day? Marka inta inyar oo aan waxba ahayn netka lagaaga soo saaray lagaaga dhigo nin wax wayn loo dhigay waxba maad dhiganne been haysku sheegin! Maanta inamada yar yar ee Jaamacada wax ka dhiga, Mid qudha oo buug wax ka dhigi karaa ma jiro, mid waliba netkaasuu ku nool yahay, aqoon netka gashayna Ilaahay Aqoon kama dhigee Ha isku Halayninee buugta wax ka barta oo Slideska iska daaya”
Sidaas ayay isku ag socdaan aduun yadu horumarka ay beegsanayso iyo garaadka sii gudhaya ee aadamuhu. Heer waxa aynu soconay dadkii xafidaayay intaas oo Suuradood, Intaas oo xadiis ah, Intaas oo erey, intaas oo gabay, intaas oo xisaab ah, in aan tahli kari la’nahay in aan xafidno number telefoon oo todoba god ah.
Maskaxdii waxa ay heshay meel kale oo ay isku halayso, si ay markaa kooma rabbaani ah iskaga gasho. Qaybtii numbarada kala garan ogayd, qaybtii ashyaada iyo magacyadooda, qaybtii magacyada dadka lagu halaynaayay, qaybtii muuqaalka xataa qaybtii toddobada cisho ee todobaadka kala garan lahaydi, hadii maanta la waydiiyo ayaanta ay tahay waa in ay mobilka ama wixii kale ee gacanta ugu jira ay hoos u dhawrtaa!
Ha moodin hadii uu aabahaa ka aradan yahay in uu dhot koomka (.com) waxba kala soo bixi kari waayo, in aad ka xariifsan tahay. isaga dhot koomkiisaa ku filan – cala shaan caqligiisaa shaqaynaaya – Haddii aad u fiirsato, aabbahaa, xagga xafidaada iyo Mugga Maskaxda wuu kaaga fiican yahay. Sidaas si la mid ah uun bay hubaal u tahay in aad adna ilmahaaga kaga wanaagsanaan doonto.
Hadaba su’aashaydu waxay tahay taloow tan waabaynu u taaganohoo waynu aragnaaye, Ilmahaaguna ta uu la kowsan doonaa Tu noocee ah bay noqon doontaa. Ma marka marka qof walba inta Robot lagu rikibo uu barkinta dheeraystaa? Mooyi! Bal Adba!
Adeer Cidna, gabay, Mid, Qaadkii Maskexeed
Heesta Sanadka 2016 Cajiib:- Abwaan Faarax Murtiile iyo Heestii Yar Yaro Hargeysa:- Shirkad Shiine Ah Oo Bilaabaysa Korontada Cadcadeeda Laga Dhaliyo Iyo Dareenada Ku Xeeran
Waa Qaybtii 4-aad ee Shekadii TAHRIIBKA IYO TAHLUKADII AAN GALAY
Sarakiil Kenyan ah oo Qorshayaal Malayiin Doolar ay Ku Helaan Ka Bilaabay...
Waxaa Taladii Dalka Si Sharci Daro Ah Ula Wareegey Amina Weris Iyo Baashe...